Burma Partnership » Media Advisory – Report Release on Paunglaung Dam
By Physicians for Human Rights Land in Our Hands and Kayan New Generation Youth • October 1, 2015
YANGON – A Press Conference will be held from2to4PM at House of Memories (U Wisara road, east side, between Dhamma Zedi Road and Myaynigone junction) to release the report “Forced Displacements and Destroyed Lives around Upper Paunglaung Dam in Shan State, Myanmar,” by Physicians for Human Rights (PHR), Land in Our Hands (LIOH) and Kayan New generation Youth (KNGY).
The report details livelihoods, health and food security impacts on 8000 people displaced by Paunglaung Dam. Representatives from the affected community as well as PHR, LIOH, KNGY will discuss the report findings.
WHEN: 2PM on Monday, October 5.
WHERE: House of Memories is on the east side of U Wisara road, between Dhamma Zedi Road and Myaynigone junction.
Vesna Jaksic Lowe, deputy director of communications, Physicians for Human Rights (PHR), vjaksiclowe@phrusa.org; 1 917.679.0110
Bill Davis, consultant, wdavis@phrusa.org; 0925 916 8531
Ko Si Thu, Lands in Our Hands: landsinourhands@gmail.com, 094 0370 6052
Khun Athai, Kayan New Generation Youth: kngy.org@gmail.com, www.kngy.org , 0925 290 7906
ရန်ကုန်- နံနက် (၁၀) နာရီ မှ နေ့ လည်ပိုင်းအထိ (ဦဝိစာရလမ်း အရှေ့ ဘက်ခြမ်း၊ ဓမ္မစေတီလမ်းနှင့် မြေနီကုန်းလမ်းဆုံကြား) တွင်တည်ရှိသော House of Memories တွင် “မြန်မာနှိင်ငံ၊ ရှမ်းပြည်နယ် အထက်ပေါင်းလောင်ရေကာတာ အနီးအနားတွင် အတင်းအဓ္ဓမပြောင်းရွှေ့ ခံရခြင်းနှင့် ဘ၀များပျက်စီး ဆုံးရုံးရခြင်း” နှင့် စပ်လျဉ်း၍အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်သည်။
ဤအစီရင်ခံစာတွင် ပေါင်းလောင်ရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်းကြောင့် ရွှေ့ ပြောင်းခံရသော လူပေါင်း ၈၀၀၀ ကျော်ရဲ့ လူနေမှုဘ၀၊ ကျန်းမာရေး နှင့် စားဝတ်နေရေးလုံခြုံရေး တို့ ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြ ထားသည်။ ကြုံတွေ့ ခံရသော ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်များအပြင် PHR၊ LIOH၊ KNGY တို့ ရှာဖွေတွေ့  ရှိ ချက်များကို ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
အချိန်: အောက်တိုဘာ ၊ ၅ရက်နေ့ ၊ ညနေပိုင်း၊ ၂နာရီ (တနင်္လာနေ့)
နေရာ: House of Memories သည် ဦးဝိစာရလမ်း၏ အရှေ့ ဘက်ခြမ်း၊ ဓမ္မစေတီလမ်းနှင့် မြေနီကုန်းလမ်းဆုံ ကြားတွင်တည်ရှိသည်။
Vesna Jaksic Lowe, ဆက်သွယ်ရေးလက်ထောက်ဒါရိုက်တာ, Physicians for Human Rights (PHR); vjaksiclowe@phrusa.org; + (1) 917.679.0110 (m)
Ko Si Thu, Lands in Our Hands: landsinourhands@gmail.com, + 95 (0) 94 0370 6052
Khun Athai, Kayan New Generation Youth: kngy.org@gmail.com, www.kngy.org , +95(0) 0925 290 7906
Tags: ASEAN, Crimes against humanity, Displacement, Kayan New generation Youth (KNGY), Land in Our Hands (LIOH), Paunglaung Dam, Physicians for Human Rights (PHR), Shan State